SomaliTalk.com ::: YUUSUF SHABAC
XAMAR CAASIMADA HALAGA BEDELO
Soomaaliya waa cusub ha u baryo, taaba qaad hor leh dib ha loo galo. Calanka bil halagu saa’idiyo. Xuduudaha Soomaaliya dib haloo xariiqo. Caasimadana Xamar halaga bedelo. Waa hadaladii iga soo maaxdey xalay markii aan seexanayey. Soojeede riyooda sidiisii haddaadan u xulan hadalkaaga weli ma aadan xeereyn xikmaddii runta ahayd. Dunidu marka uu dagaal sokeeye uu ka dhaco, waxaa la bedelaa magaca waddanka, mar-marka qaar waxaa la bedelaa midabka iyo nooca calanka, ugu dambeyn waxa hubaal ah in la bedelo caasimadii waddankaas, iyada oo ujeedada runta ahi ay tahay in la taaba qaado bilow cusub.
1918 illaa 1920kii midowgii Soofiyeedka waxa ka qarxay dagaal sokeeye oo ay ku dhamaadeen in ka badan 3.000.000.00 seddex million oo qof. Ka dib markii ay caddaalad xumo ka abuurantey dalka gudihiisa. Waxa uu waagu u baryi jirey dad hanti leh iyo kuwo sabool ah oo kaliya. Kuwa wax bartey iyo in badan oo aan magacooda aan xariiqi karin. Muslim, Katoolik iyo Oorthodoxi. Iyada oo sidaa loo qaybsan yahay ayey damceen seddex xisbi oo siyaasi ah in ay dalka u taliyaan. Xisbi ay dadku xukumaan oo federaal ah (Confederation Democracy-Social Democracy) iyo Federal republic of Soviet Union – Pure Capitalist. iyo Soviet Union People’s republic (Communist Party) Ugu dambeyn waxa xukunka ku guuleystay kuwii ugu dambeeyey ee shuuciga ahaa. Maxaa yeelay waxa ay dadka u balan qaadeen bilow cusub iyo horumar ay ka dhalandoonto midnimo joogto ah. Shuucigu waxa ay aaminsan yihiin “Ilaah ma jiro, noloshu waa maaddo, waxa na dila waa wakhtiga oo kaliya” Waxa kale oo ay dadka ku soo jiiteen in ay baabi’in doonaan dabaqadaha taajiraanta iyo fuqarada, iyo in ay bulshadu u sinaan doonto nidaamka waxbarasho iyo daryeelka caafimaad. Waxa ay xasuuqeen qoyskii boqortooyada ee ka talinayey wadanka. Waxa ay caasimadooda ay ka soo bedeleen Petersburg waxana ay caasimaad cusub ay ka dhisteen Moscow.
1776 Maraykanku wuxuu is yiri Ingiriisku tage oo dib dambe idiin soo weerari maayaan. Waxa ay qorteen nidaam qurux badan oo si fiican u dhaqay qofka midabka cad. Waxa ay samaysteen dawlad federaal ah, waxana caasimad de facto u ahayd Philadelphia PA. Oo ka tirsanayd Waqooyi wadanka Sanadkii 1880 markii ay dareemeen in uu wadanku u kala jabayo kuwo damacsan dawlad dhexe oo xoog badan oo ku nool Waqooyiga Maraykanka iyo kuwo aaminsan dawlad federaal ah oo gobolku ka xoog badan yahay dawladda federaalka ah oo ay ayagu ku nool Koonfurta waddanka ayey go’aansadeen in caasimada laga sameeyo meel u dhexeysa Waqooyiga iyo Koonfurta dalka. Washington DC ayaa loo doortey caasimada maxaa yeelay waxa ay koonfur ka xigtaa Maryland waxa ay waqooyiga ka xigtaa Virginia. Waana deegaan aan ka tirsanayd gobolna.
Dagaalkii sokeeyey ee Shiinaha ka hor waddanka shiinaha waxa caasimad u ahayd Nanchang markii dambe oo ay heshiiyeena waxa ay xariiqeen meel iska banaan oo maantey loo yaqaano Beijing. Waxa aad ogtihiin in Za’ir laga bedelay magaca ka dib markii wadanka laga saarey Zezeko oo uu xilka la wareegay Joseph Capila. Hadaba haddii ay calanku inoo xariiqeen kuwo waagii inoogu aqoonta badnaa waxa aan arkaa haddana in waddankeena laga bedeli karo calankii aan dartiis isku xumayney oo aan guul la gaari weyney.
Waxa aan arkaa in bil lagu daro si loogu muujiyo dunida Islaan-nimadeena loona ixtiraamo meelwalba oo uu ka taagan yahay. Tan ugu muhiimsan waxa ay tahay in uu ilaah raali inooga noqon doono. Waxa aan arkaa in xuduudihii dib loo xariiqo oo calanka Soomaaliya uusan marna u ekaan lambarka toddobo, maxaa yeelay marka aad fiirisaan waxa aad ogaaneysaan in ay Itoobiya caloosha nagashatay oo aan dhamaanteena ku qanacney inaga oo aan marna ka dagaalamin.
Waxa aan ugu dambeyn arkaa in caasimada laga bedelo xamar oo la geeyo meel aan Xamar ahayn. Xamar waxa ay noqotey shan iyo tobankii sano ee la soo dhaafey meel ay ku nool yihiin dad aan waxba garan oo aad u hubaysan. Kuwaan oo xabadeeya diyaaradii soo degto ama kacdo, markabkii deeqda inoo waday iyo mid damaashaad ku socdaba. Waxa Xamar yaal isbaarooyin aan marna la wada fujin karin. Suuqyada magaaladana waxaa xoog ku haysta dad aan marna la dhex gali karin. Marka lagama dhigi karo oo waxa ay yiraahdaan ma ahan magaalo fidi karta. Kismaayo dalka intiisa badan aad bey uga fogtahay, Hargaysa waxa ku nool hal qabiil. Boosaaso waa lama dagaan, Gaalkacyona waa meesha ay nooga yimaadaan dadka ugu waalan ama ugu colaadda badan. Beydhabana waxa ku nool dad u hadla sidii Ooramada oo doonaya in ay Soomaliya u qaybiyaan May iy Maxaa, sidaa awgeed waa in la xushaa meel cusub oo la ilaalin karo amnigeeda.
...MUSTAQBALKA SUGAYA MADAXWEYNE CABDILAAHI YUSUF AXMED
...MAXAA KA JIRA XAQIIQADA QUURSIGA?
Waqooyiga Ameerika iyo Wadida Baabuurta Waaweyn: Qaybtii Labaad : W.D:Yuusuf Shabac...
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 23, 2005